Sei & Nzira Yokusimudzira SEO Yako Nekutsvaga Kwekugadzira Uye Social Media - Tactics Kubva Semalt
Kana zvasvika pakuvandudza SEO, hazvisi chakavanzika chokuti zvinyorwa ndezve mambo. YakoNzvimbo yepaIndaneti inofanirwa kuva yakakosha, inoyevedza uye inobatanidza kutsvaga injini kuti iongorore kufambisa nzvimbo yako. Kwemakore,zvisinei, huwandu hwemagariro evanhu hwakapinda mumufananidzo, uye zviratidzo zvaro zvino zviri kushandiswa kubatsira zviri nani kutsvaga injini yako.Zvakajeka kuona kuti SEO, kutengesa kwehupenyu, uye huwandu hwemagariro evanhu vose vari kushanda ruoko-mu-ruoko kuti uvandudze nzvimbo yewebsite yekambani.
Kungoita izvi zvinyatsojeka, kune mazano makuru 5, akatsanangurwa naAndire Dyhan,Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt ,kuti ubatsire kuvandudza SEO yako nehuwandu hwekutengesa uye zvekugarisana nevamwe.
1 - paginas de edicion de video online. Twitter content count
Haisi kungogumira pane webhusaiti yako iyo inobatsira Google kuratidza nzvimbo yako.Kunyanya iwe iwe tweet, uye kana vanhu vakawanda vachigovana ma tweets ako, zviri nani kuti uwane mikana yekufambisa chikwata chenhamba. Izvo zvakasikwa zvakanyanya zvepasi rose yewebhu inoreva kuti maitiro akawandisa anoshandiswa kuunganidza zvose zvese uye kuiswa muhurongwa hunowanikwa.Vashandi veGoogle ndivo vakakosha mukubatsira nekunyoresa, uye ivo zvino vanofunga nezvehuwandu hwemashoko e Twitter. Sakashandisa zvakanyanya Twitter yako uye tweet kure!
2. Ita zvemasangano ako ezvehuwandu hwemasangano kuitira kuti uwane hukama hwakanaka
Nokuti kutsvaga injini iri kuedza kuunza ruzivo rwakakosha kuvanhuapo pavanenge vachichida, vanovimba nemasangano ehurumende kubatsira. Kuwedzera kwekubatanidza webhusaiti, ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vanowana nzvimbo iyozvakakodzera. Zvinosuruvarisa, vanhu vazhinji vakashandisa izvi munguva yakapfuura uye vakapindira maitiro-madhi-SEO ekusimbisa nzvimbo dzavo dzekutsvaga.Izvi zvakakonzera kutsvaga injini kutendeukira kumagariro evanhu kuitira rubatsiro..Nhasi tsvakurudzo dzinotarisa zviratidzo zvekugarana zvakadai se Facebook, Tweets,Google + 1s kuti uone kuti nzvimbo yako iri kuitei zvakanaka, uye kuti ungaitora sei zvakakodzera.
3. Shandisa huwandu hwevanhu kuti uwedzere kutendeseka kwako
Nhasi kutsvaga injini haisi kungotarisa zvinhu zviri pawebsite yako kana bhurogi.Vari kutarisa pamasangano enyu ezveshuwaridhewo zvakare. Vanhu vari kuita sei nehuwandu hwehupenyu hwako, uyewo vanhu vangani vanobatanidzakudzoka kwauri. Iko kukura kwevateereri uye kukurudzira iwe kwave kutorwawo mukufungisisa, saka shandisa nguva yako uchikudziridza kusvika kwakosekukura kwevateereri vako.
4. Tumira kuGoogle + zuva nezuva
Ita yako yepaGoogle profile, inyore zuva nezuva uye Google ichafara newe.Garai mharaunda uye post zvakakosha zviripo, shandisa purogiramu yako, ingove wakashanda pane yako yepa Google+ profile. Iva nechokwadi chekuti iwe uri chiikugoverana paGoogle yako ndeyezvinhu zvaunoda kuverengerwa.
5. Simbisa uye yakakodzera yako SEO game
Paunenge uchitaura nezve SEO nehupenyu, zvinhu zvakadai semashoko makuru, tsanangudzo dzemeta, altkuisa mifananidzo, uye nhamba yemashoko mubhuku rako rebhubhu zvose nyaya. Zvisinei, zvinhu zvakashandura zvishoma nenguva. Tsvaga injiniiye zvino anonyanya kufunga nezvehutano hwehupenyu hwako. Haisi kungoita mazwi makuru, asi pamusoro pekuti iwe unogona sei kupinduramibvunzo vanhu vari kukumbira. SEO inoshandura mararamiro ezvinyorwa zvinowanikwa mumigumisiro yako. Saka iva nechokwadi chokuti wakozvakagadzikana zvakakodzera uye kuita sezvinobvira.
SEO, kugadzirwa kwehutano, uye hutano hwehupfumi hazvirevi. Kana pane, ivoiri kuramba ichiwedzera zvakapetwa semakore achifamba. Vose vanobatsira pakunatsiridza SEO uye nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo uye inofanira kuonekwapamwe chete muurongwa hwekutsvaga webhusaiti.